Ny asa fanompoana ara-pitsaboana
“Izay nohosoran’Andriamanitra taminn’y Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy ny nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy” Asa. 10:38
Voafaritra mazava ny asantsika. Tahaka ny nanirahan’ny Ray ny Zanany lahy tokana teto amin’ity izao tontolo izaontsika ity, no hanirahan’i Kristy koa antsika, dia ny mpianany, ho misionera mpitsabo. Adidintsika ny manao ny sitrapon’Andriamanitra eo am-panatanterahana izany iraka ambony sady masina izany. Tsy ny eritreritry ny olona na ny fahaizany mitsara no fepetra entina hamaritana ny tena asa misionera fitsaboana marina (...)
Ny tena asa misionera fitsaboana dia avy any an-danitra. Tsy avy amin’olombelona, na iza na iza. Kanefa, mifandraika amin’izany asa izany, dia maro no hitantsika fa manala baraka an’Andriamanitra. Araka izany dia notoroana hevitra aho mba hilaza fa “Avy amin’Andriamanitra no niantombohan’ny asa misionera ara-pitsaboana, ary miaraka amin’izany ny iraka be voninahitra indirndra izay tsy maintsy tanterahina. Ny fisehoan’izany manontolo dia tokony hifanaraka amin’ny asan’i Kristy. Ireo izay mpiara-miasa amin’Andriamanitra dia azo antoka fa haneho ny toetr’i Kristy, tahaka ny nanehoan’i Kristy ny toetry ny Rainy fony Izy teto an-tany.
Notoroana hevitra aho hilaza fa irin’Andriamanitra ny hanadiovana ny asa misionera fitsaboana ho afaka amin’ireo toetra vasoka eto amin’ity tany ity, ka hasandratra mba hijoro amin’ny tena toerana tokony hisy azy eo amin’izao tontolo izao. Rehefa ampifandraisina amin’izany asa izany ireo drafitra maro manimba ny fanahy, dia ho rava miaraka amin’izay koa ny hery miasa mangina ananany. Koa izany no mahatonga ireo fahaverezan-kevitra maro eo amin’ny fanatanterahana ny asa misionera fitsaboana izay tena mitaky ny fiheverantsika am-pahamalinana fatratra.
Tsy misy na inona na inona afaka hanampy antsika manoloana izany asa izany, mihoatra noho ny fahatakarana sy ny fanatanterahana ny irak’Ilay Mpitsabo Misionera lehibe indrindra izay nivezivezy teto an-tany; tsy misy na inona na inona hanampy antsika mihoatra noho ny fahatsapana ny fahamasinan’izany karazan’asa izany sy ny fanehoan’izany tanteraka ny fiainam-panompoan’ilay Misionera Lehibe. Mitovy amin’ny tanjon’ny iraka notanterahin’i Kristy ny tanjon’ny iraka tontosaintsika. Nahoana Andriamanitra no naniraka ny Zananilahy ho eto amin’ity tontolo lavo ity? Mba hampahafantarana sy hanehoana amin’ny taranak’olombelona ny fitiavany azy ireo. Tonga amin’ny maha-Mpanavotra Azy i Kristy. Nanerana ny asa fanompoana notanterahiny, dia nataony izay hihazonana ho zava-dehibe sy mora takarina, ny iraka ho famonjena ny mpanota.